ट्विटरमा नयाँ वर्ष - ट्विटर - साप्ताहिक
राजनीतिक बेथितिले थिचेको, नाकाबन्दीले थलिएको, भूकम्पले लडेको मेरो देश जुन दिन उठ्नेछ त्यही दिन मेरा लागि दसैं, तिहार, लोसार, छठ अनि नयाँ वर्षको उत्सव हुनेछ ।
वर्षमा दुई–चार चोटि नयाँ वर्ष मनाउनुपर्छ । कस्तो विडम्बना †
मान्ने हो भने प्रत्येक बिहानीले नयाँपन बोकेको हुन्छ । नयाँ वर्ष पनि ३ सय ६५ दिनमध्ये कुनै दिन मनाउन सकिन्छ । बस्, कुरा यति हो, एक वर्ष पूरा भएको आभास हुनुपर्‍यो र नयाँ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने उमङ्ग मिल्नुपर्‍यो ।
यस्सो सुतौं भनेको त फेरि नयाँ वर्ष पो आउन लाइसकेछ, नेपालाँ सुत्ने वातावरण नै छैन भन्या ।
नयाँ वर्ष जहिले पनि दौडधूपमै बित्छ, कहिलेकाहीं त फुर्सदमा आउनु नि । हाम्ले चैं फुर्सदमा मनाउन नि नपाउनु ?
के आँगन जोडिएका भाइ–बुहारी भन्नु, यत्रो नयाँ वर्ष आयो गयो, शुभकामना दाजु नि भनेनन् । मेरा तर्फबाट चाहिं हार्दिक शुभकामना छ है दुवैलाई ।
हे नयाँ वर्ष
भोकालाई बन गाँस
घरविहीनलाई बन बास
भ्रष्टलाई गर नाश
विद्यार्थीलाई गर पास
दु:खीको बन दास
तब छरिन्छ यहाँ सुवास ।
मुस्कुराउँदै आयौ नयाँ वर्ष स्वागत छ तिमीलाई
छाडी जानू मुस्कान र समृद्धि हामीलाई
यदि टिकट मिल्छ भने,
लिएर जानू देशद्रोही र राष्ट्रघातीलाई ।
मन खुसी र शान्त भए हरक्षण नयाँ हुन्छ । असन्तोषले कुनै पनि कुरामा नयाँपन दिँदैन । मुस्कुराऔं, सकारात्मक बनौं अनि हरक्षणलाई नयाँ बनाऔं ।
चलिरहेको जिन्दगीसँगै रमाऊ
भोलिको पिर नलिई
सबैको साथ, हात अनि नयाँपनका साथ नयाँ वर्ष मनाऊ ।
नयाँ वर्ष खाली कापीजस्तै हो । यसको पाना जसरी भर्नुहुन्छ अन्त्यमा फल पनि उस्तै आउँछ ।
जिन्दगी उबडखाबडवाला ग्राभेल सडक होस्, निरपेक्ष सुख भनेको त उही बीच–बीचमा आउने पक्की पुलमा एकछिन सलल गाडी कुदेजस्तै त हो ।
न्यू इयर मनाउँदा विदेशीको मनाएको भनेर विरोध गर्ने, नयाँ वर्ष मनाउँदा काम छैन नेपालीको, रमाइलो गर्ने निहुँ चाहिन्छ भन्नेलाइ के भन्ने ?
वर्षमा दुई पटक नयाँ वर्ष मनाउने भाग्यमानी नेपालीबाहेक अरू को होलान् त ?
अलिअलि युरिक एसिड लागेछ, अलिअलि बियर लागेछ । अलिअलि फुटसल लागेछ अनि अलिअलि जंकफुड लागेछ । समग्रमा नयाँ वर्ष लाग्यो दाजु ।
मन पराइएन भद्रगोलको नयाँ एपीसोड, जिग्री पाँडेको नयाँ शो असोजमा
नयाँ लेडी फाइटर
ट्विटरमा आइफा एवार्डको चर्चा असार १७, २०७६